ပြောမယုံကြုံမှသိ ( ၃ ) — Steemit
ပြောမယုံကြုံမှသိ ( ၃ )
ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုသုံးယောက်သား စကားပြောကောင်းနေတာနဲ့ ည (၁၁)နာရီလောက်ရှိသွားတယ်ဗျ.....။ကိုသန်းထွန်းက စကားပြောကောင်းကောင်း ကျုပ်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်က အသဲတထိတ်ထိတ်နဲ့ နားထောင်ရတာကိုကြိုက်နဲ့...... သိပ်ကိုအတိုင် အလှည့်ညီနေတာဗျ...........။ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ......ဟာ...... ကိုသန်းထွန်း ထင်းကုန်သွားပြီဗျ.......။ဟင်........မင်းကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ ထင်းတွေကြည် မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်နေတာကိုကွ........။ဟဲ....ဟဲ......။ထင်းက ပေါပါတယ်ကွာ........။ကဲ........မင်းတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်နေခဲ့...။ငါ ထင်းသွားယူလိုက်အုံးမယ်........။ကိုကြီး အဝေးကြီးသွားမနေနဲ့နော်........။မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့......။ဟား......ဟား......မင်းကလဲကွာ ကြောက်စရာမရှိ ကြံဖန်ကြောက်နေတယ်.......။ဒီမှာ သန်းလွင်လဲရှိတာပဲ........။ဟင်.....ကျုပ်ကလဲ ကြောက်တာပဲဗျ........။ဒီလယ်ပွဲထဲ.....ညမပြောနဲ့ နေ့တောင် သိပ်ရောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး........။ဟင်း......ညီအကိုနှစ်ယောက်ကတော့ တွဲမိပါ့ကွာ..........။အင်းပါကွာ....တန်းပြန်လာခဲ့မယ်..........။ကိုသန်းထွန်းက ဓာတ်မီးဆွဲ ပြီး အနောက်နားက သစ်ပင်တွေဆီ ထင်းခြောက်သွား ရှာတာပေါ့ဗျာ............။
ညီအကို နှစ်ယောက်သား မီးဖိုလေးဘေးထိုင်နေရင်းက ထင်းကျန်တာလေးတွေ ထည့်လိုက်တော့ မီးတောက်လေးတော်တော် တောက်လာတယ်ဗျ............။အဲအချိန်မှာ စတာပဲဗျို...........ဝုတ်........ဝုတ်.......ဝုတ်..
မဲကောင်ကဟောင်ရောဗျ.........။ဟာ...ကိုကြီး လုပ်ပြန်ပြီထင်တယ်.......။ခွေးက တဲကိုကြည့်ပြီးဟောင်နေတာဗျ........။မီးကလဲ ရှိတဲ့ထင်းလေးအကုန်ထည့်ထားတာ ဆိုတော့ မီးတောက်ကလေးက ထတောက်တဲ့အတောက်မှာ...... ညီအကို နှစ်ယောက်သား ခွေးဟောင်တဲ့ဘက် လှည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့.....။ဟာ.......ဟာ.....ဟာ......တဲပေါ်မှာဗျာ......မဲမဲကြီး ဆံပင်ဖားယားကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို ကျောပေးပြီးထိုင်နေတာဗျ.......မီးဖိုကလဲ မီးတောက်နေတော့ အရှင်းကြီးဗျို.......တကိုယ်လုံးကလည်း...အမွေးတွေလိုလို မဲမဲကြီး.......ဆံပင်တွေကလဲ နောက်ကျောတခုလုံး ဖုံးပြီး ဖြူဖက်ဖက်ကြီးဗျာ........။ကြောက်လိုက်တာဆိုတော့.....။
တကိုယ့်လုံး ထုံကျဉ်သွားသလိုလို......ဆံပင်တွေပဲထောင်လာသလိုလို.....ခေါင်းကြီးပဲကြီးလာသလိုလို.....ကြက်သီးတွေကလဲ တဖြန်းဖြန်းနဲ့ထ.......နှစ်ယောက်သား ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှ......ဟင်! ဆိုတခါတည်း......ကိုကြီးရေ......ကိုသန်းလွင်ရေ....သကုန်ဖြဲအော်တာပေါ့ဗျာ....။ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ....။
မြွေမှန်း ကင်းမှန်းမသိ အမှောင်းကြီးထဲ ပြေးချလိုက်တာ ဓာတ်မီးတောင် မထိုးမိပါဘူးဗျာ.........။လယ်ကန်သင်းက
ခါးလောက် ခြုံပုတ်တွေကို လွှားခနဲ..... လွှားခနဲ.....ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဘယ်လိုခုန်လိုက်မိမှန်းမသိဘူးဗျို...........။အဲဒါနဲ့ ကိုသန်းထွန်းက......ဟကောင်တွေ ဘာဖြစ်တာတုန်းဟ.......။ဓာတ်မီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီလှမ်းထိုးတော့မှ......ကိုသန်းလွင်နဲ့ ကျွန်တော် သူ့ဆီပြေးတာပေါ့.......။ဟာ....ဘာဖြစ်တာတုန်းဟ....ပြောစမ်းပါအုံး....သူကလဲ အလှန့်တကြားနဲ့ မေးတာပေါ့......။အမလေး စကားပြောနိုင်ဖို့ နေနေသာသာ......ကိုယ့်ဗိုက်ကိုမနည်းနှိပ်ပြီး အမောဖြေနေရတယ်ဗျို............။ပြောစမ်းပါဟ.......ဘာဖြစ်တာလဲလို့........။ဟောဟဲ ဟောဟဲ........။ကိုကြီး...............။ဟား........သရဲ.....သရဲ....ခြောက်လို့ဗျ........။ဟာ...မင်းတို့ကလဲကွာ.....မဟုတ်တာ......ဟုတ်တယ်ဗျ....ကိုသန်းထွန်းရ.....တဲပေါ်မှာဗျာ......မဲမဲကြီး ဆံပင်ဖားယားကြီးနဲ့ဗျ......။ဟား.......မောလိုက်တာဗျာ........။ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်လုံး မြင်လိုက်တာဗျ.......။ကျွန်တော်ကလဲ...ဟုတ်တယ်ပေါ့....ပြောမှ...သူယုံသွားတယ်ဗျ.......။ဟင်..... ဟုတ်လားဟ......။ကိုသန်းထွန်းက ကျွန်တော်တို့ကို သရဲခြောက်လွှတ်လိုက်တယ်ပြောတော့......လာသွားမယ်ကွာ...။သွားကြည့်ရအောင်......။ဘယ်လဲကိုကြီးရ.....။တဲဆီကို......။ဗျာ..................................။
ကိုသန်းထွန်းဆိုတာ ကျွန်တော့် အကိုဝမ်းကွဲဗျ.......။သူက သရဲမကြောက်တတ်ဘူးဗျ.......။ညဆိုလဲ လယ်ထဲသွားရင် တစ်ယောက်တည်းဆိုလဲသွားတာပဲ......။လယ်တောနဲ့ နီးတဲ့လမ်းက သချိုင်းကုန်းနားက လမ်းဆိုရင်လဲအဲဒိလမ်းကပဲသွားတယ်......။ညအခါ ငှက်လည်ပစ်ရင် သချိုင်းကုန်းပေါ်က ငှက်ပေါတယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း သွားသွားပစ်တာဗျ.......။တော်တော်ကို သတ္တိရှိတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်ပေါ့....။
အဲလိုနဲ့.......ကိုသန်းထွန်းက ဓားရှည်ကြီးကိုကိုင်ပြီး ရှေ့ကသွားတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုသန်းလွင် သူ့နောက်က ကြောက်ကြောက်နဲ့ ကပ်လိုက်သွားရတာပေါ့ဗျာ..................။တဲရှေ့ရောက်တော့ တဲပေါ်ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်.......တဲနောက်....တဲပါတ်ချာလည် ထိုးကြည့် ...........ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဗျ....။ မင်းတို့ ဟာကလဲ ဟုတ်ရောဟုတ်လားကွာ...............။ဟာ.....ကိုကြီးကလဲ ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှ........။ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်စလုံး မြင်လိုက်တာဗျ.............။နေအုံး........အခုတခါ လာပါစေအုံး..........။ပေါ်လာလို့ကတော့........တခါတည်း ပိုင်းထည့်လိုက်မယ်.........။”နင်တို့တွေ ကိုယ့်ဖာသာနေနော် ထပ်ခြောက်လို့ကတော့ တဲမီးနဲ့ရှုံ့ပစ်မယ်..”ဘာညာနဲ့ ဟောက်ပြောနေတာပေါ့ဗျာ..။အမလေးကိုကြီးရာ.......။မလုပ်ပါနဲ့...........။ခုညတောင်အိပ်မရအောင်လုပ်ထားပါအုံးမယ်ဗျာ.......။သူကသာ အဲလိုတွေပြောနေတာ......ကိုသန်းလွင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့.......ကြောက်လွန်းလို့ ဆက်ဆက်တောင်တုန်နေတယ်ဗျာ............။
Thank bro or sis
funlover1122 (34) · last year
I follow you Follow mee back plz
Comment ဖတ်​ပြီး ​ကြောက်​လို့စာမဖတ်​ပဲ ပြန်​ထွက်​သွားသည်​။...
​သေပီ အိပ်ခါနီးမ ဖတ်​မိတယ်​😂😂
ညမဖတ်ရလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးပါမယ် bro
Thank bro, I will try
ဖတ်လို့ မရဲဘူး ကြောက်တယ်ဟ
ဘုရား တရားသာ အာရုံပြာအိပ်ပါတော့ ဘုန်းဘုန်း
Really i like this post , Good .....
ကျွန်တော် ရယ် ကို သန်းထွန်း ရယ် ကို သန်းလွင်ရယ်
Inn ကနေ့ညတော့ ဘယ်လိုအိပ်ရမလည်းဟေ့…
Good Post and Good Writing bro.
သူ့ ပြောမယုံနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကလည်း ညဘက်ဆိုကြုံပီ...